Alshabaab oo war ka soo saartay Weerarkii ay ku dileen Xildhibaano iyo Mas’uuliyiin kale | Ceel Cade News
Alshabaab oo war ka soo saartay Weerarkii ay ku dileen Xildhibaano iyo Mas’uuliyiin kale
Kooxda Alshabaab ayaa war ka soo saaray weerarkii ay galabta ku qaaday kolonyo ay la socdeen xildhibaanno ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo qasaare badan loo geystay jidka u dhaxeeya Jowhar iyo Balcad.
rasmi ah oo kasoo baxay kooxda AlShabaab ayaa lagu sheegay inay weerarka ku qabsadeen Laba gaari ayna ku dileen 10 askar iyo laba xildhibaan oo ka tirsan maamulka Hirshabelle, kana qaateen laba qori oo nooca BKM ah.
Mas’uuliyiinta weerarka lagu dilay ayaa kala ah: Daahir Mukhtaar Cabdulle iyo Ismaaciil Muumin Hilowle oo ka tirsanaa Baarlamaanka Hirshabelle iyo Muuse Afweyne oo ahaa guddoomiye ku xigeenkii degmada Raaga Ceelle. Waxaa kaloo lagu dilay Xassan Dhagey oo ahaa taliyaha gaarka ah ee ciidamada madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Alshabaab ayaa sii xoojisay weerarrada ay bishan Ramadaan ku qaadeyso guud ahaan gobollada Koonfurta Soomaaliya ee ay ka howlgasho.